2014 January & February donation plan « One Dollar Fund – Myanmar (ODF Myanmar)
2014 January & February donation plan
2014 - Jan & Feb Plan
As the venue for January & February, 2014 donation plan (43rd monthly donation), ODF Myanmar has chosen “Koe Na Win” monastic education centre from Pauk Kone Quarter, Mingalardon Township, Yangon Division.
“Koe Na Win” monastic education centre was established by Abbot U Thondra eight years ago. With the guidance of ten teachers, the education centre is giving free education to children from surrounding areas and providing lunches and stationery for needy children.
There are total 470 students, ranging from kindergarten to 11th level, and among them, about 30 boys are staying at the monastery as novices.
Although the education centre was established as primary school level, it has been upgraded to high school level due to the number of students increased over 8 years. Therefore, it is needed to expand the school buildings and currently, most of the classrooms are located at temporary buildings which are under construction.
Therefore we are announcing this news so that our friends and donors, who are enthusiastic to offer hands, would cooperate with us in contributing to suchaplace which provides free education for children.
Please be informed that donations will be collected till2March, 2014. Donations can be made through ODF volunteers (http://odfmyanmar.org/volunteers/) or to ODF Bank Accounts (Singapore, Myanmar). Detailed information for bank accounts and addresses can be found at our websitehttp://odfmyanmar.org/donate.
ODF Myanmar (One Dollar Fund – Myanmar) ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလ အလှူ (၄၃ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ) အဖြစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ပေါက်ကုန်းရပ်ကွက်ရှိ ကိုးနဝင်း ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းအား လှူဒါန်းရန် ရွေးချယ်ထားပါသည်။
အဆိုပါကျောင်းသည် ကျောင်းအုပ်ဆရာတော် ဦးသုန္ဒရမှ ဦးစီး၍ ထူထောင်ခဲ့သည်မှာ (၈)နှစ်ကျော် ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၀ဦးခန့်ဖြင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ ကလေးများအား အခမဲ့ ပညာသင်ကြားပေးခြင်း၊ ချို့တဲ့သော ကလေးများအား နေ့လည်စာနှင့် စာရေးကိရိယာများ ထောက်ပံ့ခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးလျက် ရှိပါသည်။
ကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသော သူငယ်တန်းမှ ဒဿမတန်းအထိ ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း ၄၇၀ ယောက်ရှိပြီး ကျောင်းသား ၃၀ခန့် မှာ ကိုရင်ဝတ်အနေဖြင့် ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား နေထိုင်လျက် ရှိပါသည်။
ကျောင်းတည်ထောင်စဉ်က မူလတန်းအဆင့်ထိသာ ပညာသင်ကြားပေးခဲ့သော်လည်း (၈)နှစ်အတွင်း ကျောင်းသားဦးရေ များပြားလာခြင်းကြောင့် အထက်တန်းအဆင့်အထိ အတန်းများ တိုးမြှင့်သင်ကြားပေးနေရပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကျောင်းဆောင်နေရာ တိုးချဲ့ရန် လိုအပ်လျက် ရှိပြီး လက်ရှိတွင် စာသင်ခန်းအများစုမှာ ဆောက်လုပ်ဆဲ ယာယီကျောင်းဆောင်အနေဖြင့်သာ ရှိပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ယခုကဲ့သို့ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအား အခမဲ့ပညာရေး ပေးဝေလျက်ရှိသော ကိုးနဝင်း ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း အတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အားဖြည့်ကူညီလိုသူ စေတနာရှင် မိတ်ဆွေများနှင့် အလှူရှင်များအား မိမိတို့ ODF Myanmar နှင့် လက်တွဲ၍ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလ အလှူတွင် တတ်စွမ်းသလောက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။
အလှူငွေများကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကောက်ခံသွားပါမည်။ အလှူငွေများကို ODF Volunteers http://odfmyanmar.org/volunteers/ များမှ ဖြစ်စေ၊ ODF Bank Accounts (Singapore, Myanmar) သို့ ဖြစ်စေ လှူဒါန်းနိုင်ပြီး ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အသေးစိတ်ကို http://odfmyanmar.org/donateတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။